Jimicsiyada lugaha caatada ah - Talaabooyin, talooyin iyo inbadan | Bezzia
Susana godoy | 10/06/2021 14:00 | Jimicsiga
Ma rabtaa inaad ogaato waa maxay jimicsiyada ugu fiican ee lugaha miisaanka lumaan? Maanta waxaad ka tagi doontaa shaki sababtoo ah waa mid ka mid ah xulashooyinkaas qaar badan oo badani dalbadaan. Marwalba ma sahlana in hoos loo dhigo aaggaas gaarka ah ee jirkeena iyo sababtaas awgeed, waxaan u muuqannaa inaan si deg deg ah u quusanno.
Sidaa darteed, waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo a isku darka jimicsiga aasaasiga ah, kuwa kale ee gaarka ah iyo waxaas oo dhan waxay ku xeeran yihiin cunto caafimaad leh halka ay jiraan. Kaliya markaa kadib ayaan ku guuleysan karnaa wax kasta oo aan u dhaqaaqnay. Dabcan, waa inaad yeelataa xoogaa dulqaad iyo adkeysi. Miyaynu bilaabaynaa inaan u dagaallano hadafkeenna?
1 Sida ugu dhakhsaha badan loo gubo baruurta lugta
2 Maxaa la joojinayaa cunista lugaha oo caato ah
3 Jimicsiyada lugaha iyo bowdyaha caato ah
3.3 Tallaabo kor iyo hoos
4 Jimicsiyada lugaha oo caato ah isla markaana baabi'iya cellulite
5 Khiyaano iyo jimicsi si aad caatadaada u dhuujiso
Sida ugu dhakhsaha badan loo gubo baruurta lugta
In kasta oo aan dooneyno, waxaan horay u soo sheegnay inaanan had iyo jeer ku lumin karin dufanka meel kasta oo ka mid ah jirka si deg deg ah. Laakiin waa run inaan helno dariiqooyin xoogaa ka gaaban. Midka koowaad waa in laga fekero cunno caafimaad leh ama qaab nololeed. Maaha inaan gaajoonno Waxba kama yara, laakiin waxaan yareynaa qaadashada kaloriinteena, waxaan doorbidnaa khudaar badan iyo borotiinno, waxaan haysannaa karbohaydraytyo laakiin waxaan ka qaadannaa cunnooyinka la shiilay iyo keega nolosheenna in muddo ah.
Dhanka kale, waxaa jira qeybta jimicsiga oo lagu dhameystiray cuntada. Xaaladdan oo kale, waxaad ku bilaabi kartaa adigoo ku boodaya sameynta edbinta sida waxqabadyada wadnaha. Waa kuwee? Hagaag, socod ku tag xawaare dhexdhexaad ah, ku orod baaskiil wadid ama wareejin iyo dabcan, jaranjarooyinka kor ama hoos ayaa sidoo kale loo tiriyaa sida oo kale. Dhammaantood waa waxqabadyo wadnuhu ku tartamo ku dhowaad daqiiqadda ugu horreysa, taas oo siin doonta natiijo fiican marka ay timaaddo macsalaameynta dufanka. Labadaba kahor, inta lagu gudajiray iyo kadibba, xusuusnow inaad cabto biyo fara badan ama shaah geedaha ah iskana dhaaf cabitaanada sonkorta leh. Tallaabooyinkaagii ugu horreeyay ee aad ku gaadhayso himilada aad doonayso ayaa durba la qaatay!
Maxaa la joojinayaa cunista lugaha oo caato ah
Waa su’aal aad loo soo celceliyo marka laga hadlayo culeyska lugaha ama meelaha kale ee jirka. Laakiin Runtu waxay tahay inaan runtii cunno, laakiin caafimaad iyo ka duwanaansho badan. Waa run in usbuuciiba hal mar aan isku raaxeysan karno, laakiin haddii aan ilaalino qaab nololeed ku saleysan cunno caafimaad leh, waan gaari doonnaa yoolka sida ugu dhow ee aan fileyno.
Waa inaan dhahnaa macsalaameyn, ama macsalaameyn, dhamaan cuntada horay loo kariyey, la shiilay ama keega.
Sidoo kale, sidoo kale cabbitaannada kaarboon-karboonka leh ama casiirka la baakadeeyay.
Waxaan cabbi doonnaa faleebooyin badan ama kafee laakiin caano aan dufan lahayn, iyo sidoo kale yogurts sidoo kale sonkor la'aan.
Sida hilibka, waa run in dhowr jeer usbuucii aad heli karto wax alla wixii aad jeceshahay. Laakiin waqtiga intiisa badan waa inaan diirada saarnaa hilibka cad sida digaaga ama turkey.
Kalluunka, tuna iyo xoogaa cunto badda ah ayaa sidoo kale qeyb ka noqon doona cuntadeena cusub.
Dabcan, dhammaan borotiinnadaas waa in lagu daraa khudradda. Xaqiiqdii, kuwani waxay daboolayaan kalabar saxankaaga. Qeybta kale, qeyb waxay noqon doontaa borotiin iyo qeybta kale ee carbohydrateska sida rootiga qamadiga oo dhan ama baastada.
Waxaa ku jira miraha daqiiqadaha fudud iyo kordhinta fiitamiinnada aad adiguba u baahan tahay.
Jimicsiyada lugaha iyo bowdyaha caato ah
Waa maxay jimicsiga ugufiican ee lugahaaga caato? Waa su’aal markasta ina haysa oo imika, jawaabteeda waanu helaynaa. Laakiin maahan mid kaliya, laakiin waxaan heli doonaa dhowr dhammaantoodna runtii waxtar leh, sidaa darteed, waxaan ku tijaabineynaa jirkeena.
Kahor intaadan bilaabin markasta jimicsi jimicsiHad iyo jeer waa lagugula talinayaa inaad horay u kululeyso si looga fogaado dhaawacyada soo socda. Taasi waxay tiri, markay tahay ka jawaabida su'aasha ah laylisyada ugufiican lugaha caatada ah, waxaa nalaga fadhiyaa fadhiisimo booska koowaad. Waxaan haynaa dhowr nooc, oo leh ama aan lahayn miisaan, oo leh bar, sumo, isometric, iwm Laakiin waa in la sheegaa in dhammaantood ay ka fiicnaan doonaan wax ka qabashada waxa maanta halkaan na keenay. Waxaa intaa dheer, waxaad abuuri kartaa jaangooyo leh dhowr nooc si tababarkaagu uga dhigo mid raaxo leh. Xusuusnow inaad nasato illaa 20 ilbidhiqsi inta u dhexeysa baloog kasta.
Xaaladdan oo kale, tallaabooyinku waxay naga caawin doonaan inaan lumino miisaanka laakiin sidoo kale inaan u dhawaaqno lugta oo dhan. Marka sidoo kale waa inay ku jirtaa hawl maalmeedkeena. Waad istaageysaa, iyadoo kala tag yar oo udhaxeysa aadna dib ugulaabaneyso dhabarka mid kamid ah lugahaaga, halka kan kale uu wali jilicsan yahay. Laakiin xusuusnow in jilibku uusan dhaafi karin qeybta cagta maxaa yeelay markaa waxaan yeelan karnaa nooc dhaawac ah. Sambabbada waxay la noqon karaan boodbood, dhinaca dambe, laad laadinta xagga hore ama kor u qaadista, iwm. Maxaa markale inaga dhigaya ikhtiyaar aan ku abuuri karno tababarkeena joogtada ah. Waad isku dari kartaa fadhi oo ka bax, qado qaado.
Tallaabo kor iyo hoos
Tallaabo, kursi ama tallaabo ayaa saldhig u noqon doona layligan oo kale. Sababtoo ah waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan sii wadno inaan siino lugaheena dhaqdhaqaaq badan, taas oo aad ugu baahan. Iyo sidoo kale Waxaan ku soo darnaa miskaha, afarleyda ama weylaha jimicsi sidan ah. Waxaan bilaabeynaa inaan istaagno kahor talaabadeenna, laakiin haddii aad dooratay keyd ama khaanad, waa inaysan ka sarreyn jilbaha. Waxaan dul saarnay hal cag, anagoo talaabo qaadeyna oo iskula riixeyna lugta kale. Wax kastoo dherer ah ee la doortay, had iyo jeer isku day inaadan qaan-dhigin jirka, laakiin inaad dhabarka toosanto, adoo sameynaya xoogga lugaheena Waad beddeli kartaa lugaha si aad u dhammaystirto dheellitiran.
Waa jimicsi dhammaystiran, sidaa darteed sidoo kale waa inay ku jirtaa tababarkayaga. Waxaad ku bilaabi kartaa labadaba xoqitaan iyo xoqitaan. Kadib, adoo gacmahaaga dhulka dhigaya, cagahaaga dib ayaad ujeedi doontaa, riix yar. Markaa waan kici doonnaa oo haa cagaha ayaan ku boodi doonnaa, si aan mar labaad ugu laabanno dhulka si aan howsha u bilowno. Haddii lagu sameeyo qaab kacsan, waxaan heli doonnaa natiijo fiican maxaa yeelay waxay sidoo kale ka dhigeysaa wadnaha orod badan. Dabcan, waa inaad markasta hagaajisaa xoogga iyo dadaalka baahiyahaaga.
Jimicsiyada lugaha oo caato ah isla markaana baabi'iya cellulite
Dhibaatada kale ee naga walwalsan waa cellulite. Mid ka mid ah caqabadahaas aan had iyo jeer laga adkaan karin, sidaa darteed waa inaan wax badan ka qabannaa dhinaceena. Marka lagu daro dhammaan talooyinkii hore, nuances qaarkood waa in lagu daraa. Tusaale ahaan, qeybta cuntada, waa run taas midhaha sidoo kale waa la joogaa laakiin kiiskan, waxaan ku sii sharad badnaan doonaa miraha loo yaqaan 'strawberries', qaraha ama mooska maxaa yeelay waxay leeyihiin antioxidants waxayna naga celinayaan inaan sii haysanno dheecaanno badan, taas oo ka mid ah saldhigyada ay ku ururaan cellulite-ka.
Layliyo ka mid ah lugaha oo caato ah lagana takhaluso cellulite, waxaan ku harnay kuwa u baahan xoogaa xoogaa ah. Tan ugu fiican tan waa in lagu sharaddeeyo kooxda laastikada, taas oo had iyo jeer ka caawisa dhawaaqida qayb kasta oo shaqeyneysa. Marka halkan runtii waa loo baahan yahay. Ha iloobin sambabbada iyo fadhiisimayaasha aan waligood maqnaan karin sababtan. Laakiin xusuusnow in xaaladdan, waxaad sidoo kale kaa caawin kartaa naftaada culeyska, inaad ku raaxeysato natiijooyin wanaagsan. La mid ah koritaanka iyo hoos u kaca jaranjarooyinka, halkaasoo aad culeys ku saari karto anqawyadaada. Tani waxay kaa caawin doontaa baabi'inta hoos u dhaca iyo inaad u muujiso lugahaaga fadeexad dhaqso badan intaad filaysay.
Khiyaano iyo jimicsi si aad caatadaada u dhuujiso
Khiyaanooyinka weli in la xuso ka mid ah, intaas ayaan ku harnay waa inaad kordhisaa qaadashada borotiinkaaga. Sababtoo ah ka sokow inaan dheregno oo naga caawisa inaan kordhinno murqaha. Haddii aad ka mid tahay dadka aan subixi karin kafeega subaxa, ka dib si dhexdhexaad ah u cab laakiin ha iloobin. Intaa waxaa dheer, waxaad had iyo jeer ku raaci kartaa caano dufan leh. Waxaad horeyba u ogayd inay tahay cabitaan soo dadajiya dheef-shiid kiimikaadka sidaas darteed waxaan sidoo kale ugu baahan nahay nolosheena. Cusbada hal dhinac ayaa loo dhigaa, sidaad horayba u maleysay, waxaana ugu wanaagsan in lagu daro xawaashyada sida toonta, oregano ama waxkasta oo aad ugu jeceshahay. Waxaad heli doontaa dhadhan laakiin adigoon haynin cabitaanno.
Si aad u yareyso bowdyahaaga waxaad ku sharad geli kartaa layliyo kale sida buundada garbaha. Taasi waa, waa inaad dhabarka u seexataa iyadoo lugahaagu laabmayaan oo aad tartiib tartiib u neefsanaysid oo aad kor u qaadaysid jidhkaaga laakiin ha ku samaynin baloog. Waxaad taageeri doontaa cagaha cagtiisa iyo qeybta garbaha. Layligani waa lagu kala duwanaan karaa iyadoo kor loo qaado gacantaada ama cagaha la saaro suulasha. Waa mid ka mid ah shaqooyinka sida caadiga ah lagu sameeyo Pilates anshaxu wuxuu naga caawin doonaa qaabkiisa iyo jimicsiga dhawaaqa. si aan u gaarno hadafkeena.
Lugta kor u qaadista waa mid ka mid ah kuwa ugu aasaasiga ah. Markale jiifso, wajiga, waxaan kor uqaadi doonaa hal lug kadibna si tartiib tartiib ah ayaan hoos udhigi doonaa anaga ooon taaban dhulka marka aan kor uqaadi doono tan kale. Jimicsiga aaggan ka sokow, waxaan sidoo kale la sameyn doonnaa caloosha. Marka waxaan horayba u dilnay laba shimbir hal dhagax! Si tartiib tartiib ah oo u raacaya dhammaan talooyinka, waxaad hubtaa inaad dareento faraqa. Noo sheeg!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Jimicsiga » Jimicsiyada lugaha caato ah